लूका ५ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
५ एक चोटिको कुरा हो, येशू गनेसरेत तालको* किनारमा उभिएर परमेश्वरको वचन सिकाइरहनुभएको थियो अनि भीड उहाँको कुरा सुन्न ठेलमठेल गर्दै थियो। २ तब उहाँले तालको किनारमा बिसाइराखेको दुई वटा डुङ्गा देख्नुभयो तर त्यसका जलारीहरू भने डुङ्गाबाट ओर्लेर आ-आफ्ना जाल धोइरहेका थिए। ३ उहाँ तीमध्ये एउटा डुङ्गामा चढ्नुभयो, जो सिमोनको थियो र उहाँले त्यसलाई पाखाबाट अलि पर लैजान तिनलाई भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँ बस्नुभयो अनि त्यही डुङ्गाबाट भीडलाई सिकाउन थाल्नुभयो। ४ आफ्नो कुरा भनिसकेपछि उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो: “डुङ्गालाई गहिरो ठाउँतिर लैजाऊ र माछा समात्न तिमीहरूले आ-आफ्ना जाल खसाल।” ५ तर सिमोनले जवाफ दिए: “गुरुज्यू, हामीले रातभरि मेहनत गऱ्यौं तर केही भेट्टाएनौं, तैपनि तपाईंको आग्रहमा म जाल खसाल्नेछु।” ६ जब तिनीहरूले त्यसै गरे, तिनीहरूका जालहरूमा थुप्रै माछा परे, यहाँसम्म कि तिनीहरूका जालहरू फाट्न लागे। ७ त्यसैले तिनीहरूले अर्को डुङ्गामा भएका आफ्ना साथीहरूलाई आएर मदत गर्न इशारा गरे। अनि तिनीहरू आए र दुवै डुङ्गा भरे, यहाँसम्म कि ती डुङ्गाहरू डुब्न लागे। ८ यो देखेर सिमोन पत्रुसले येशूसामु घुँडा टेक्दै भने: “हे प्रभु, म पापी मानिस हुँ, त्यसैले मदेखि टाढा गइहाल्नुहोस्।” ९ किनकि त्यति धेरै माछा समात्न सकेको देखेर तिनी र तिनीसित भएकाहरू सबै चकित भएका थिए। १० जब्दीका छोराहरू याकूब र यूहन्ना, जो सिमोनका साझेदारहरू थिए, तिनीहरूको हालत पनि यस्तै थियो। तर येशूले सिमोनलाई भन्नुभयो: “डराउन छोड। अबदेखि उसो तिमीहरूले मानिसहरूलाई जिउँदै समात्नेछौ।” ११ त्यसैले तिनीहरूले डुङ्गाहरू पाखामा ल्याए र सबै कुरा छोडेर उहाँको पछि लागे। १२ अर्को एक चोटिको कुरा हो, उहाँ कुनै एउटा सहरमा हुनुहुन्थ्यो। हेर, पूरै शरीरभरि कुष्ठरोग लागेको एक जना मानिस त्यहाँ थियो! जब उसले येशूलाई देख्यो, तब उसले लम्पसार परेर उहाँलाई दण्डवत्‌ गऱ्यो र यसो भन्दै बिन्ती गऱ्यो: “प्रभु, यदि तपाईंसित इच्छा मात्र छ भने पनि मलाई शुद्ध पार्न सक्नुहुन्छ।” १३ अनि आफ्नो हात पसारेर उहाँले उसलाई छुनुभयो र भन्नुभयो: “मसित इच्छा छ। तिमी शुद्ध भइजाऊ।” अनि तुरुन्तै उसको कुष्ठरोग हरायो। १४ तब येशूले यो कुरा कसैलाई नभन्नू भनी त्यस मानिसलाई आदेश दिनुभयो। उहाँले उसलाई यसो पनि भन्नुभयो: “जाऊ, गएर पुजारीलाई देखाऊ अनि आफू शुद्ध भएँ भनी तिनीहरूलाई साक्षी दिन मोशाको निर्देशनबमोजिम भेटी चढाऊ।” १५ तर उहाँको चर्चा झन्‌-झन्‌ फैलँदै थियो अनि भीडका भीड मानिसहरू उहाँको कुरा सुन्न र आफ्ना रोगहरू निको पार्न उहाँकहाँ भेला हुने गर्थे। १६ उहाँ भने निर्जन ठाउँहरूमा रहेर प्रार्थना गरिरहनुहुन्थ्यो। १७ एक दिन उहाँ सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि गालील र यहूदियाका हरेक गाउँ र यरूशलेमबाट आएका फरिसी र व्यवस्थाका शिक्षकहरू त्यहाँ बसिरहेका थिए। अनि उहाँसित मानिसहरूलाई निको पार्ने यहोवाको शक्ति थियो। १८ अनि हेर, एक जना पक्षाघातीलाई मानिसहरूले खाटमा बोकेर ल्याए। तिनीहरू भित्र पसेर उसलाई उहाँको अगाडि राखिदिन बाटो खोज्दैथिए। १९ तर भीडले गर्दा उसलाई भित्र लैजाने बाटो नपाएपछि छानामा चढेर तिनीहरूले झिंगटी हटाए अनि खटियासमेत उसलाई येशूको अगाडि ओराले। २० अनि तिनीहरूको विश्वास देखेर उहाँले भन्नुभयो: “मित्र, तिम्रो पाप क्षमा भयो।” २१ यो सुनेर शास्त्री र फरिसीहरूले* यस्तो तर्क गर्न थाले: “परमेश्वरको निन्दा गर्न आँट गर्ने यो को हो? परमेश्वरबाहेक अरू कसले पापहरू क्षमा गर्न सक्छ र?” २२ तर तिनीहरू के तर्क गर्दैछन्‌ भन्ने चाल पाएर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरू आफ्नो मनमा के तर्क गर्दैछौ? २३ के भन्न सजिलो छ, ‘तिम्रो पाप क्षमा भयो’ भन्न कि ‘उठेर जाऊ’ भन्न? २४ तैपनि मानिसको छोरासित पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अख्तियार छ भन्ने तिमीहरूले बुझ . . .।” उहाँले पक्षाघात भएको त्यस मानिसलाई भन्नुभयो: “म तिमीलाई भन्छु, उठ र तिम्रो खटिया बोकेर आफ्नो घर जाऊ।” २५ तब ऊ तिनीहरूकै अगाडि जुरुक्क उठ्यो अनि आफू सुत्ने गरेको खटिया बोक्यो र परमेश्वरको महिमा गर्दै आफ्नो घरतिर लाग्यो। २६ यो देखेर तिनीहरू सबैको खुसीको सीमा रहेन अनि तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गर्न थाले र तिनीहरूलाई डरले छोप्यो। अनि तिनीहरू यसो भन्न लागे: “आज हामीले अनौठा कुराहरू देख्यौं!” २७ यी सबै कुरापछि उहाँ बाहिर जानुभयो र लेवी नाम गरेको कर उठाउने मानिसलाई कर उठाउने ठाउँमा बसिरहेको देख्नुभयो र उहाँले तिनलाई भन्नुभयो: “मेरो पछि लाग।” २८ अनि सब कुरा छोडेर तिनी उठे र उहाँको पछि लागे। २९ उहाँको लागि लेवीले आफ्नो घरमा ठूलो भोज दिए र त्यहाँ कर उठाउने अनि अरू मानिसहरूको ठूलो भीड उहाँसित खान बसिरहेका थिए। ३० यो देखेर फरिसी र तिनीहरूका शास्त्रीहरू यसो भन्दै उहाँका चेलाहरूसित गनगनाउन थाले: “तिमीहरू किन कर उठाउने र पापी मानिसहरूसित बसेर खान्छौ?” ३१ येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो: “निरोगीहरूलाई होइन तर रोगीहरूलाई डाक्टरको खाँचो पर्छ। ३२ म धर्मीहरूलाई बोलाउन आएको होइन तर पापीहरूलाई पश्‍चात्ताप गर्न बोलाउन आएको हुँ।” ३३ तिनीहरूले उहाँलाई भने: “यूहन्नाका चेलाहरू घरीघरी उपवास बस्छन्‌ र उत्कट बिन्ती चढाउँछन्‌ अनि फरिसीहरूका चेलाहरू पनि त्यसै गर्छन्‌ तर तपाईंका चेलाहरू भने खान्छन्‌ र पिउँछन्‌।” ३४ येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “दुलहा आफूसँग होउन्जेल के तिमीहरूले तिनका साथीहरूलाई उपवास बस्न लगाउन सक्छौ र? ३५ तर यस्तो बेला आउनेछ, जब दुलहालाई तिनीहरूबाट निश्चय अलग पारिनेछ, तब तिनीहरू उपवास बस्नेछन्‌।” ३६ यसबाहेक उहाँले तिनीहरूलाई अर्को एउटा दृष्टान्त पनि बताउनुभयो: “कसैले पनि नयाँ लुगाबाट टालो काटेर पुरानो लुगामा सिलाउँदैन; किनकि त्यसो गऱ्यो भने नयाँ टालोले पुरानो लुगालाई फटाउँछ अनि नयाँ लुगाबाट काटेको टालो पुरानो लुगासित मेल पनि खाँदैन। ३७ त्यसै गरी कसैले पनि नयाँ दाखमद्य पुरानो मशकमा* राख्दैन; किनकि त्यसो गऱ्यो भने नयाँ दाखमद्यले मशक च्यात्नेछ र दाखमद्य पोखिनेछ अनि मशक पनि कामै नलाग्ने हुनेछ। ३८ तर नयाँ दाखमद्य नयाँ मशकमै राख्नुपर्छ। ३९ जसले छिप्पिएको दाखमद्य पिएको छ, उसले नयाँ पिउने मन गर्दैन, किनकि उसले भन्छ, ‘छिप्पिएकोचाहिं राम्रो।’ ”
^ लूका ५:१ * यो गालील समुद्रको अर्को नाम हो। मत्ती ४:१८ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ लूका ५:२१ * इस्वी संवत्‌ प्रथम शताब्दीको यहूदी धर्मको एउटा प्रमुख पन्थ।
^ लूका ५:३७ * जनावरको छालाबाट बनेको थैलो।